Antsoy izahay: + 8613832728087
Mitsangana sy mitsivalana
Corrugated Carboard Production Line
milina fanontam-pirinty Flexo
Masinina laminating haingam-pandeha mandeha ho azy Configuring tokana
Ny taratasy tava sy ny taratasy ambany dia manaiky ny fanaraha-maso servo fibre optika, ny fahamarinan'ny lamination dia marina kokoa, tsy misy fanitsiana tanana aloha sy aoriana. Ny fibra optika havia sy havanana eo anoloana sy aoriana dia mahita ny lalan'ny fihetsehan'ny taratasy, ary mijanona ny fanairana rehefa diso lalana ny taratasy. ...
Fampidirana ny toetran'ny fitaovana Ny maodely dia karazana solosaina mandeha ho azy tanteraka, ny fametrahana ny programa dia amboarina ho azy ho an'ny milina iray manontolo, ny halavany sy ny sakan'ny taratasy ihany no ampidirina ao amin'ny interface man-machine, ary ny milina dia voalamina ho azy amin'ny plac ...
Ny orinasanay manokana amin'ny famokarana baoritra corrugated baoritra tsipika famokarana nandritra ny 30 taona. Ny tena vokatra dia corrugated board tsipika famokarana, mandeha ho azy laminating milina, semi-automatique laminating milina, semi-automatique fantsika boaty milina, mandeha ho azy fantsika boaty milina, mandeha ho azy h...
SQDJ-2500/2800 Fanamboarana milina boaty fantsika mandeha ho azy roa
A. Departemantan'ny famahanana taratasy: 1. Ny maotera lehibe dia mampiasa ny fandrindrana ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po, ny rafitra dia tsy misy feo, ary ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha dia miovaova sy maharitra. 2. Ny fomba famahanana taratasy roa-servo dia raisina mba hahatonga ny fanitsiana ho azo antoka, mahomby ary marina. 3. Ny ampahany famahanana taratasy eo anoloana...
Ny lohan'ny milina fanontam-pirinty dia mitadidy: ny antony mahatonga ny fingotra-roller sy ny toro-hevitra momba ny fikojakojana
Torohevitra momba ny fikojakojana Mba hanelanelana ny androm-piainan'ny roller ink, manoro hevitra ny manam-pahaizana momba ny teknolojia fanontam-pirinty fa amin'ny fampandehanana tena izy, azafady, tadidio ireto manaraka ireto: ① Ny fanitsiana ny tsindry amin'ny roller ink dia tokony mahafeno ny fepetra takiana, ary ny tsindry amin'ny roller plate dia tokony ho nojerena isan-kerinandro....
Ny fingotra fingotra amin'ny milina fanontam-pirinty (anisan'izany ny rollers amin'ny rano sy ny rollers ink) dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny dingan'ny fanontam-pirinty, fa amin'ny famokarana tena izy dia maro ny orinasa mpanonta no hanolo ny rollers fingotra tany am-boalohany aorian'ny fampiasana azy. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia tsy ampy fanadiovana sy...
ZJ-V5B hydraulic shaftless fikosoham-bary mijoro ※ endri-javatra ara-drafitra: ★ manaova hydraulic fiara mba hamita ny taratasy clamping, hamaha, manala ho an'ny antonony, fandikana ankavia sy havanana ary ny hafa, ny fanandratana ny taratasy mampiasa hydraulic fiara. ★ frein Adjustable mampiasa multipoint rafitra frein. ★hatramin'izao...
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty ahitana ny dingana farany amin'ny baoritra famokarana tsipika, ny fanontam-pirinty, slotting, folding, gluing sy ny fanisana ny baoritra dia azo vita amin'ny anjara, tena notsorina ny baoritra vokatra dingana dingana. Ny ampahany elektrika amin'ny milina manontolo dia misafidy ny iraisam-pirenena ...
NY FAHOMBIAZANA SY NY FAMPISEHOANA AMIN'NY LALAN'NY FAMPANDROSOANA BIRAO (2)
Telo, warpage 1. Warpage dia mizara ho: mitsivalana midina midina, mitsivalana miakatra mitsangana, longitudinal miakatra midina, longitudinal midina midina, S-miendrika warping, roa-lalana warping 2. Ny loza ateraky ny warping: ① Rehefa vita ny milina board corrugated dia tapaho, tsy azo automatique ny taratasy...
NY FAHATSIAROVANA SY NY FEPETRA MIARAKA AMIN'NY LALAN'NY FAMPANDROSOANA BIRAO
1. Ratsy adhesion (loko misokatra, lakaoly sandoka) Ny zava-bita dia: aorian'ny adhesion voalohany ny baoritra mandritra ny 5 minitra, eo ambanin'ny hetsiky ny hery ivelany, ny anatiny, ny ambonin'ny na ny A, B taila na ny sandwich dia misaraka tanteraka , ary ny fibres taratasy rehetra dia tsy misy dikany, tsy misy nap, ary ...
Ny tsy fahombiazana mahazatra sy ny fanoherana ny tsipika famokarana board corrugated
Fahalalana mifandraika amin'ny indostria momba ny milina famonosana baoritra
Ny taratasy dia vita amin'ny hazo, volotsangana ary bozaka misy akora fibre samihafa. Ny hatevin'ny taratasy novokarin'ny fikosoham-bary, na namboarina ho taratasy sy baoritra. Tsy hentitra anefa ny andalana. Amin'ny ankapobeny, ny lanjan'ny fototra dia latsaky ny 200 g / m na latsaky ny 0,1 mm matevina. Col...
milina fanaovana boaty corrugated / milina facer tokana
Ny milina tokana dia ahitana ny fitanana horonan-taratasy sy ny milina iray miforona amin'ny sisiny tokana. Voalohany, mafana ny taratasy fototry ny corrugated, ary avy eo ny horonan-taratasy corrugated dia ampiasaina mba hamoronana ny endrika corrugated ilaina. Farany, ny lakaoly (adhesive hydroéthylamidon) dia ampiharina amin'ny tampon'ny corrugated sy combi ...
Nandritra ny taona maro, noho ny kalitao avo ny vokatra ny orinasa, mpanjifa maro no nifidy ny vokatra, Anisan'izany ny mpanjifa avy any Turkmenistan, Nividy 1800 karazana telo corrugated baoritra famokarana tsipika, Efa nampiasaina nandritra ny telo taona, Customer Feedba. ..
Manana ekipa matanjaka aorian'ny varotra, debugging sy fikojakojana fitaovana maharitra manerana ny firenena
[Famintinana famaritana] Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. dia hita ao atsimon'ny renivohitra Beijing sy avaratr'i Jinan. Tena mety tsara ny fitaterana rano sy an-tanety. Izy io dia orinasa matihanina amin'ny famokarana milina baoritra sy pr ...
Teknolojia | Inventory ny fototry ny fahaverezan'ny baoritra sy ny fepetra fanatsarana.
Ny fahaverezan'ny orinasa baoritra no antony lehibe misy fiantraikany amin'ny vidiny. Raha voafehy ny fatiantoka, dia mety hampitombo ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny ankapobeny izany ary hanatsara ny fifaninanana amin'ny vokatra. Andeha hojerentsika ny fatiantoka isan-karazany ao amin'ny orinasa baoritra. Raha tsorina, ny t...
Jereo ny anton'ny fiovaovan'ny haavon'ny baoritra.
Raha ny momba ny tsy fahampian'ny baoritra mivalona dia maro ny olona hieritreritra baoritra mivalona. Raha ny marina, ity tranga ity dia tsy mitovy amin'ny mivadika. Aroso ny fanadihadiana amin'ny lafiny maro toy ny akora, milina kapila tokana, flyover, milina fametahana, fehikibo conveyor, p...
3km atsimon'ny tanànan'i Dongguang County atsinanan'ny lalam-pirenena 104